Shirkadda MSG Oo Abaalmarino Guddoonsiisay Boqolaal Qof & Daah-furka Barnaamij Cusub Oo Kale | Himilo Media Group
Shirkadda MSG Oo Abaalmarino Guddoonsiisay Boqolaal Qof & Daah-furka Barnaamij Cusub Oo Kale
Hargeysa, 13 Oct, 2019 (Himilo)-Shirkadda MSG ITC ayaa barnaamij ay ugu tallo gashay in ay dadkeeda dib wax ugu celiso oo ay muddo soo socday ku soo gabbagabeysay Caasimada Somaliland, isla markaana daah-furtay Barnaamij kale oo dadku ku heli karaan Gawaadhi.
Haddaba, Xaflad ballaadhan oo ay ka qayb galeen Xildhibaano, Ganacsato iyo Wakiillo ka kala socday Xarumaha Shirkadda MSG ITC ee Gobollada JSL ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey Magaalada Hargeysa, gaar ahaana Green Plaza Hotel.
Shirkadda MSG ITC ayaa Barnaamijka ay soo gabbagabeysay waxa ka soo qay galay ilaa kummanaan qof waxaana Abaalmarino kala duwan ku guuleystay ilaa laba boqol oo qof, sidaasi awgeedna isla xalay shirkadda MSG ITC, waxay halkaasi ku daah-furtay Barnaamij kale oo ay Macaamiisheedu ku heli karaan Gawaadhi.
Ugu horreyn, Xafladaasi oo hadalo badan laga soo jeediyey ayaa Maxamed Siciid Saleebaan oo ka mid ah Masuuliyiinta sare ee Shirkaddaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada ay u qabteen barnaamijyadan iyo ahmiyadda ay u leeyihiin dadweynaha waxaanu yidhi, “Barnaamijkan waxa aanu ugu tallo galnay waa Abaal marinta Macmiilka iyo in aanu dib wax ugu celino Macaamiishayada, waxaanu noqon doonaa laba barnaamij oo kala ah mid aanu soo gabagabeynayno iyo mid aanu daah furayno”.
Maxamed waxa kale oo uu ka warramay Barnaamijka ay soo gabagabeeyeen iyo ahmiyadda uu lahaa, “Waxaanu soo gabagabeynay barnaamijka aanu ugu talo galnay Isticmaalaha oo ay ugu yaraan laba boqol oo qof Jaa’isado ku guuleysteen, iyadoo dadka ka qayb galey ay noqdeen ilaa 100,000qof”.
Sidoo kalena, Maxamed Siciid Saleebaan, waxa uu sheegay inay daah-furayaan Barnaamijkii labaad oo ah mid cusub, “Barnaamijkan cusub ee labaad ee isla caawa aanu daah-furayno waa Barnaamijkii Guryaha oo waxa lagu heli doonaa Gawaadhi oo waxa kale oo ku jiri doona oo aanu mar labaad fursad siinay Isticmaalihii, iyadoo aanu isticmaalaha laftiisa aanu hadyadaha kor u qaadnay oo lagu heli doono Hal Gaadhi, waxaanay Macaamiisha iibsataa ay heli doonaan hal Gaadhi”.
Sidoo kalena, Abwaan Dhuux oo ka socday Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga ayaa si weyn u ammaanay Shirkadan, “Adduunyadu macaamiil ayey leedahay oo shirkadani waxay cadeysay oo ay runtii cadeysay oo ay golle ka cadeysay in aanay aheyn shirkad gacan adag, balse ay tahay shirkad waddani ah oo dadkeeda dib wax ugu soo celinaysa, isla markaana ah Shirkad deeqsiyad ah”.
Dhinaca kalena, Xildhibaano iyo Xubno kale ayaa iyaguna Xafladaasi hadalo ka soo jeediyey ay ku muujinayaan muhiimada ay dadka u leeyihiin labadan barnaamij ee ay dadkeeda u soo bandhigtay Shirkadda MSG ITC.
Ugu dambeyntiina, Abaalmarino isugu jiray Wireless internet 4G ee SO!, Dallado, Tallaagado, Taleefanada Smart Phone, iyo agabyo kale ayaa la guddoonsiiyey Xubnihii ku guuleystay abaalmarinta oo tiradoodu ka badneyd ilaa laba boqol oo qof, waxa kale oo iyaguna halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey Shaqaalaha iyo Hawlwadeenada Shirkadda MSG ITC.